Hawlaha Horumarinta: Xaaladda Waraaqaha Artistka
By Shanai Matteson , Colin Kloecker
Iyadoo ay ka mid yihiin Hagaha Wadajirka ah ee Hawlaha Shaqada, Colin Kloecker iyo waxaan nasiib u yeeshay inaan ka shaqeyno farshaxanada ka soo jeeda beelo kala duwan iyo asal xirfadeed. Dhibaatooyinkeena, waxoogaa yar ayaa isbarbardhigaya wakhtiyadii hore ee aan la garanayn, oo aan la isku halaynin waqtigooda oo ay la wadaagaan asxaabteena, haddii ay tahay haraati ku saabsan fikrado cusub oo firfircoon, ka hadlida geedi socodka hal-abuurka ama caqabadaha iyo abaalmarinta xirfad farshaxan, ama waqti ku qaatay helitaanka fanka iyo shaqadiisa ama shaqadeeda kahor galinka ama waxqabadka
Waxa aan aragno waa wax aan macquul aheyn in lagu dhejiyo fannaaniinta, ama si guud loo soo bandhigo waayo-aragnimadooda, saadaalinta saameynta ama guuritaanka xiga. Maanta, farshaxanadu waxay barayaan xirfado cusub, oo is baraya; abaabulka iyo noqoshada abaabulayaasha; helitaanka ganacsi iyo abuurista shabakado cusub oo taageero ah shaqadooda; iyo helitaanka siyaabo cusub oo lagu soo bandhigi karo geedi socodka hal-abuurka iyo aragtida ah meelaha meelaha aan la filayn.
Tani waxay ahaan kartaa marwalba, laakiin ka duwan ereyadii hore, warbaahinta bulshada hadda waxay suurtogal u tahay inay farshaxan-yahannada iyo dhagaystayaashu siiyaan shabakad, baranayaan, oo ay wadaagaan cawska joogtada ah, noloshooda hal-abuurnimo leh ee dhexdhexaadinta wada sheekeysiga, iyo dardar-gelinta fikradaha iyo xidhiidhada bulshada.
Maaddaama farshaxannadu ay ka soo horjeesanayaan farshaxanka u dhexeeya farshaxanka iyo hawlaha kale (ganacsiga, ururinta beesha, dhismaha magaalada, oo kaliya in loo magacaabo dhowr) waxay noqoneysaa mid aad u adag in la sharaxo gobolka gobolka dabiiciga farshaxanka. Dhab ahaantii, ma cadda sida ugu fiican ee loo taageeri karo loona ilaalin lahaa nooca shaqada hal-abuurka ah ee soo if-baxaya, oo ka soo horjeeda qaybaha caan ah, iyo, marka la isku daro, waxay bilaabaan inay bedelaan farshaxanka iyo bulshada.
Marka McKnight Foundation waydiistay Horumarinta Horumarka sida aan ula socon doono sannad-guuradii barnaamijka Fellowship Fanaanka, waxaan isla markiiba ka fakarnay sheekooyinka hodanka ah iyo khibradaha badan ee 30-ka sano iyo in ka badan 1,100 oo farshaxan oo helay abaal-marintaan. Waxaan soo jeedinay mashruuc kaas oo ku dhawaadba ka soo horjeeda sahan dhamaystiran. Halkii ay isku dayi lahaayeen in ay madaxdeenna ku wareegaan guud ahaan, raadinta naqshado ama waddooyin hore, waxaan soo jeedinnay geedi socod dhegeysi oo nagu soo dhaweynaya, oo qoto dheer, noloshii mugdi hore ee McKnight Fellows.
Inta lagu gudajiro sannadka, waxaan kufadhiisan doonaa waqti yar oo kaliya mugdi badan oo farshaxanno kuwan ah. In kasta oo ay dhammaantood ka soo jeedaan asal farshaxan oo kala duwan ayna ka shaqeeyaan warbaahinta kala duwan, kama dhigno in tan ay tahay tusaale tijaabo ah oo ku saabsan bulshada farshaxanka ee Minnesota. Halkan, waxaan rajeyneynaa inaan soo bandhigno sheekooyinka adag ee sheekooyinka ee farshaxan-yahanno kuwan oo ay yihiin maanta, waxaanay siiyaan aragtiyo kala duwan, hababka, iyo waayo-aragnimada ay farshaxannadu ku kulmayaan shaqadooda.
Waxaan dooranay inaanu sidan u samayno mashruuc fiidiyow ah, sababtoo ah waa dhexdhexaad inoo cusub.
Caadi ahaan, waxaan ka shaqeynaa isgoyska farshaxanka iyo naqshadeynta, abuurista mashaariic bulsho iyo barnaamijyo leh fanaaniin kale, iyo ka qaybgalayaasha dadweynaha. Xaaladahaas, xoogga la saaro jawiga ku habboon, natiijada waa ay adag tahay in la saadaaliyo sababtoo ah waxay ku lug leedahay ka qaybqaadashada dad badan. Marka ay dhammaato, badanaa way ka weyntahay; marka laga reebo sawirro yar oo (rajo-geliya) qabashada ruuxa waxa dhacay.
Anaga, la shaqeynta fiidiyoowgu waa ka tagidan tan dadweynaha, ka qaybqaadashada. Waxaan rajeyneynaa in aan ogaanno caanahan farshaxan-yahanka ah waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale sahamino gaari kale oo ku saabsan danaha iyo kartida farshaxanka.
Sababtoo ah fiidiyow kasta waa iskaashi la leh farshaxanka, ma ballanqaadi karno in ay qaadan doonaan qaab gaar ah, marka laga reebo in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan webka. Xaaladaha qaarkood, waxaan sidoo kale qorsheyneynaa baaritaanka guud ee farshaxanka, waxaan kugu martiqaadaynaa inaad nagu soo biirto wejiga weji-horaad ee mawduucyada soo baxa.
Waxaan isticmaali doonaa blogkan si aan ugu dirno mashruuc kasta sida uu u socdo, oo soo dhawee jawaab celinta faallooyinka ama cinwaanka emailkayaga: hello [at] shaqada.
Shaqada Hawlgalka horumarka ee Bill Cottman ayaa la soo dhajin doonaa wiiggan dambe.